Agyede No—Onyankopɔn Akyɛde a Ɛsen Biara - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
12 Bible kyerɛkyerɛ amane a Yesu hui ansa na ɔrewu no mu kɔ akyiri. Wɔhwee no yayaayaw, bɔɔ no asɛnduam atirimɔden so, na owuu owuyaw wɔ asɛndua no so. (Yohane 19:1, 16-18, 30; Hwɛ Nkekaho no) Dɛn nti na na ɛho hia sɛ Yesu hu amane pii saa? Yebehu wɔ nhoma yi ti bi mu akyiri yi sɛ na Satan aka sɛ onnye nni sɛ Yehowa wɔ asomfo bi a wɔyɛ nnipa a wɔbɛkɔ so adi Yehowa nokware wɔ sɔhwɛ mu. Yesu nam ne mudi mu a okuraa pintinn ɛmfa ho amanehunu a emu yɛ den a ohyiae no so maa Satan nyaa asɛm a ɔkae no ho mmuae a eye sen biara. Yesu ma ɛdaa adi sɛ onipa a ɔyɛ pɛ na otumi fi ne pɛ mu yɛ ade betumi akura ne mudi mu koraa ama Onyankopɔn a nea Ɔbonsam yɛ biara mfa ho. Ɛbɛyɛ sɛ Yehowa ani gyee yiye wɔ nokware a ne Dɔba no dii no ho!—Mmebusɛm 27:11.
15Bɔne fafiri. Esiane sɛ wɔde sintɔ awo yɛn nti, ɛsɛ sɛ yɛyere yɛn ho ankasa ansa na yɛatumi ayɛ nea ɛfata. Yɛn nyinaa yɛ bɔne wɔ kasa anaa nneyɛe mu. Nanso, ɛdenam Yesu agyede afɔre no so no, yebetumi anya “bɔne fafiri.” (Kolosefo 1:13, 14) Sɛ yebenya saa fafiri no a, gye sɛ yenu yɛn ho nokwarem ansa. Ɛsɛ sɛ yefi ahobrɛase mu nso gyina Yehowa Ba no agyede afɔre no mu gyidi a yɛwɔ so srɛ Yehowa hɔ bɔne fafiri.—1 Yohane 1:8, 9.
16Ahonim pa a yebenya wɔ Onyankopɔn anim. Sɛ yɛn ahonim bu yɛn fɔ a, ɛnyɛ den koraa sɛ yɛn abam betumi abu na yɛate nka sɛ mfaso nni yɛn so. Nanso, ɛdenam fafiri a yɛnam agyede no so anya nti, Yehowa da ayamye adi ma yetumi fi ahonim pa mu som no ɛmfa ho sɛ yɛtɔ sin no. (Hebrifo 9:13, 14) Eyi ma yetumi ne Yehowa kasa wɔ ahotoso mu. Enti yetumi de ahotoso kɔ n’anim wɔ mpaebɔ mu. (Hebrifo 4:14-16) Sɛ yekura ahonim pa mu a, yenya asomdwoe, yenya obu ma yɛn ho, na ɛma yɛn ani gye.
17Daa nkwa wɔ paradise asase so ho anidaso. Romafo 6:23 ka sɛ: “Bɔne akatua ne owu.” Nkyekyɛm koro no ara de ka ho sɛ: “Na akyɛde a Nyankopɔn de ma ne daa nkwa a ɛnam yɛn Awurade Kristo Yesu so.” Yesusuw Paradise asase a ɛreba no mu nhyira ahorow ho wɔ nhoma yi Ti 3. (Adiyisɛm 21:3, 4) Esiane wu a Yesu wu maa yɛn nti na yebetumi anya saa nhyira yi nyinaa ne daa nkwa a yare nnim daakye no. Nanso, sɛ yebenya saa nhyira yi a, ɛsɛ sɛ yɛda no adi sɛ yɛn ani sɔ akyɛde a ɛne agyede no.
20Nya Yesu agyede afɔre no mu gyidi. Yesu ankasa kae sɛ: “Nea ogye Ɔba no di no wɔ daa nkwa.” (Yohane 3:36) Yɛbɛyɛ dɛn atumi anya Yesu mu gyidi? Ɛnyɛ yɛn ano nko na yɛde ka sɛ yɛwɔ gyidi a ɛte saa. Yakobo 2:26 ka sɛ: “Gyidi a nnwuma nnim awu.” Yiw, yɛde “nnwuma,” a ɛne yɛn nneyɛe, na ɛkyerɛ nokware gyidi. Ɔkwan biako a yɛfa so kyerɛ sɛ yɛwɔ Yesu mu gyidi ne sɛ yɛbɛyɛ nea yebetumi biara de asuasua no wɔ nea yɛka ne nea yɛyɛ nyinaa mu nso.—Yohane 13:15.
21Kɔ Awurade Anwummeduan nkaedi no ase afe biara. Wɔ Nisan 14, 33 Y.B. mu anwummere no, Yesu de afahyɛ titiriw bi a Bible frɛ no “Awurade anwummeduan” no sii hɔ. (1 Korintofo 11:20; Mateo 26:26-28) Wɔsan frɛ afahyɛ yi Kristo wu Nkaedi. Yesu de sii hɔ na aboa n’asomafo no ne nokware Kristofo a wɔbɛba wɔ wɔn akyi nyinaa ma wɔakae sɛ ɛnam ne wu a owui sɛ onipa a ɔyɛ pɛ no so na ɔde ne kra anaa ne nkwa mae sɛ agyede. Yesu kae wɔ saa afahyɛ yi ho sɛ: “Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae me.” (Luka 22:19) Nkaedi no ase a yɛkɔ no ma yɛkae ɔdɔ kɛse a Yehowa ne Yesu nyinaa yii no adi wɔ agyede no a wɔde mae no ho. Yebetumi akyerɛ anisɔ a yɛwɔ ma agyede no denam Yesu wu Nkaedi afahyɛ no ase a yɛbɛkɔ afe biara no so.*
* Sɛ wopɛ nea Awurade Anwummeduan no kyerɛ ho nsɛm pii a, hwɛ Nkekaho no.